China Thermochromic pigment ye thermochromic Paint Thermochromic Ink Ink Thermochromic Mucheka Kugadzira uye Fekitori | Topwell
Themochromic pigmentsanoumbwa nema micro-capsules ayo anochinja ruvara zvichidzoka. Kana tembiricha ikakwidziridzwa kune yakatarwa tembiricha iyo pigment inoenda kubva kune mavara kune isina ruvara (kana kubva kune imwe vara kuenda kune rimwe ruvara). Ruvara runodzokera kune rwekutanga ruvara sezvo iyo pigment yatonhodzwa pasi.
Themochromic pigments inoumbwa nema micro-capsules anoshandura ruvara achidzosera kumashure. Kana tembiricha ikakwidziridzwa kune yakatarwa tembiricha iyo pigment inoenda kubva kune mavara kune isina ruvara (kana kubva kune imwe vara kuenda kune rimwe ruvara). Ruvara runodzokera kune rwekutanga ruvara sezvo iyo pigment yatonhodzwa pasi.
Iyo tembiricha yekugadzirisa inofanirwa kudzorwa pazasi pe200 ℃, iwo madiki haafanire kudarika 230 230, kupisa nguva uye kudzikisira zvinhu. (Kupisa kwakanyanya, kudziya kwenguva refu kunokuvadza iyo mavara eiyo pigment).
Thermochromic pigment inogona kushandiswa kune ese marudzi ehupamhi uye masvikiro senge pendi, ivhu, mapurasitiki, inki, ceramics, jira, bepa, chakagadzirwa firimu, girazi, cosmetic ruvara, nzara polish, lipstick, nezvimwe. inki, Screen
kudhinda kunyorera, kushambadzira, kushongedza, kushambadzira zvinangwa, matoyi epurasitiki uye akangwara machira kana chero izvo zvaunofungidzirwa zvinotora iwe.
Zvepurasitiki: Thermochromic pigment inogona zvakare kushandiswa nepurasitiki jekiseni kuumbwa kana extrusion zvigadzirwa zvakadai sePP, PU, ​​ABS, PVC, EVA, silicone, nezvimwe.
Zvekuvhara: thermochromic pigment inokodzera mhando dzese dzepasi pekupfeka zvigadzirwa.
Kune inks: thermochromic pigment inokodzera mhando dzese kudhinda kwezvinhu, kusanganisira jira, bepa, chakagadzirwa firimu, girazi, nezvimwe.
* Inokodzera yechisikigo, chipikiri pendi kana imwe yekugadzira zvipikiri art. - Yakasimba: Hapana hwema, eco-hushamwari, tsime kupisa kuramba.
* Inokodzera Kugadzira iyo vara inoshandura thermochromic slime iyo inoshandura ruvara netembiricha yeimba kana yekirasi.
* Inokodzera yemachira kudhinda, skrini yekudhinda, chengetedzo offset ink.
Pashure: Photochromic pigment uv pigment ruvara shanduko yeupfu nezuva
Zvadaro: Uv fluorescent pigment yeanti-falsification kudhinda
UV fluorescent pigment yeanti-falsification peji ...
Photochromic pigment uv pigment ruvara shanduko po ...